8 Kulliyadaha ugu wanaagsan ee dhexdhexaadka ah ee injineernimada ardayda
8 Kulliyadaha injineernimada dhexdhexaadka ah ee ugufiican ardayda
Halkan waxaa ah liistada kulliyadaha injineernimada dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan ee aad dalban karto. Haddii aad tan raadineysay, waxaad u badan tahay inaad jawaab heshay.
Adduunyada maanta, xirfadaha injineernimada iyo teknolojiyadda ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan. Dhowr jaamacadood oo caalami ah oo adduunka ah ayaa bixiya shahaadooyin heer caalami ah oo dhowr koorso ah oo ku hoos jira anshaxa injineernimada.
Wadamada sida Kanada oo ay joogaan arday caalami ah oo aad u tiro badan, waxaan horey u soo bandhignay liis ku saabsan sagaal jaamacadaha si fiican ugu shaqeynaya injineernimada farsamada dalka gudihiisa sidoo kale waxaan ka soo hadalnay 5ta ugu sareysa jaamacadaha ugu fiican injineernimada Kanada guud. Waxaan ku liis garaynay jaamacadahaan oo ay weheliyaan fursadaha deeqaha waxbarasho ee ay bixiyaan.
Dhammaan hay'adaha sare ee abaalmarinta bixiya ee adduunka ah inay ogaadaan midda saxda ah ee lagu barto barnaamij kasta oo injineernimo ah way ku adkaan kartaa ardayda, sababta aan waqti ugu helno baaritaanka iyo ururinta liisaska dabeecaddan.
Haddii aad raadineyso kulliyadaha injineernimada dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan, halkan waxaa ku yaal liiska tixgelinta ugu wanaagsan 8 iyaga ka mid ah.
8 Kulliyadaha injineernimada dhexdhexaadka ah ee ugufiican
James McKelvey Iskuulka Injineernimada -Washington University
Iskuulka Injineerinka ee Cockrell - Jaamacadda Texas, Dallas (UTD)
Machadka Machadka Farsamada ee Georgia ee Injineerinka
Kuliyada Injineerinka iyo Xisaabinta Jaamacadda Miami University
Dugsiga Injineerinka Pratt - Jaamacadda Duke
Dugsiga Injineerinka ee Jaamacadda Tufts
Kuleejka Injineerinka ee Jaamacadda Seattle
Thomas J. Watson School of Engineering - Jaamacadda Binghamton
Jaamacadda Washington ee St. Louis
Machadka Teknolojiyadda Georgia.
James McKelvey Iskuulka Injineerinka -Washington Jaamacadda
Jaamacadda Washington waa mid ka mid ah kulleejooyinka heerka dhexe ee ugu wanaagsan adduunka. Waxaa la aasaasay 1853 waxayna ku taalaa St. Louis, Missouri.
Jaamacadu waxay bixisaa gelitaanka injineernimada barnaamijyada shahaadada koowaad, barnaamijyada xirfadeed, barnaamijyada Master iyo shahaadada dhakhaatiirta (Ph.D.) labadaba barasho buuxda iyo waqti dhiman.
Jaamacaddu waxay ka kooban tahay illaa 9 kulliyadood guud ahaan, oo ay ku jiraan dugsiga sii wadista waxbarashada.
James McKelvey School of Engineering waa qayb ka mid ah Jaamacadda Washington ee ku taal St. Waxaa la aasaasay 1854, dugsiga injineernimada waa xarun cilmi baaris oo leh jawi waxbarasho oo wanaagsan oo ku taal Jaamacadda Washington ee Danforth Campus, Mareykanka. Iskuulka injineernimada ee McKelvey wuxuu bixiyaa barnaamijyo shahaadada koowaad ee jaamacadeed, iskuduwayaal waaweyn iyo / ama shahaadooyin badan iyo barnaamij laba shahaado ah.
Barnaamijyada Shahaadada Jaamacadeed: In kasta oo kani yahay kulleejooyinka injineernimada dhexdhexaadka ah, haddana iskuulku wuxuu bixiyaa barnaamijyo injineernimo oo kala duwan. Waa kuwan afartooda sano, barnaamijyo waqti-buuxa ah oo u horseedaya bachelor-ka shahaadooyinka sayniska;
Injineernimada farsamada, iyo
Nidaamka sayniska iyo injineernimada.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad xiisaynayso barnaamij tacliimeed oo sal ballaaran oo salka ku haya cilmiga injineernimada, Dugsiga Machadka ee 'McKelvey School of Engineering' wuxuu kaloo bixiyaa Bachelor of Science (BS) Major oo ku xeel dheer cilmiga sayniska oo leh fursado dhowr ah, oo ay ku jiraan injineernimada kiimikada, sayniska kombiyuutarka iyo xisaabta, injineernimada korantada , injineernimada farsamada, iyo nidaamka sayniska & injineernimada.
Ikhtiyaarrada barnaamijyadani waxay siinayaan dabacsanaan dheeraad ah ardayda aan doonaynin inay noqdaan injineerro ruqsad haysta oo doonaya inay doortaan shaqadooda koorsada iyadoo loo eegayo ujeeddooyinkooda waxbarasho ee gaarka ah.
Ma waxaad raadineysaa wax kulleejooyin dhexdhexaad ah oo injineernimo ah si aad u qaadatid koorso kasta oo ku saabsan injineernimada? Dugsiga injineernimada ee McKelvey wuxuu noqon karaa doorashadaada ama ugu yaraan, mid ka mid ah liiskaaga.
Halkan waxaa ah mid kale oo ka mid ah kulleejooyinka heerka dhexe ee injineernimada si loo tixgeliyo sida xulashada daraasadaha injineernimada. Jaamacadda Texas ee Dallas waa jaamacad cilmi baaris ah oo leh sideed dugsi iyo in ka badan 140 darajo tacliimeed oo ay ku jiraan barnaamijyada ugu sarreeya ee ganacsiga, injineernimada, sayniska, maqalka iyo farshaxanka.
Jaamacadu waxay caan ku tahay barnaamijyada cilmi baarista (Master Degree iyo Doctorate Degree)
Iskuulka Erik Jonsson ee injineernimada iyo sayniska kombiyuutarka ee hoos yimaada UTD waa mid ka mid ah kulleejooyinka heerka sare ee injineernimada adduunka oo bixiya shahaadooyin laga bilaabo shahaadada koowaad ilaa Ph.D. heer.
Sayniska Kombuyuutarka Sayniska Korantada
Haddii aad raadineyso mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan adduunka si aad u barato injineernimada, waxaad ka dhigan kartaa Erik Jonsson Iskuulka Injineerinka iyo Sayniska Kombiyuutarka ee Jaamacadda Texas, Dallas doorashadaada.
Kuleejka Injineerinka Machadka Farsamada ee Georgia, oo sidoo kale loo yaqaan Georgia Tech, waa mid ka mid ah hormuudka iyo qiimeynta heerka sare ee kulleejooyinka injineernimada, jaamacad cilmi baaris dadweyne oo ku taal Mareykanka. Waxaa la aasaasay 1885, xerada weyn ee jaamacadu waxay ku taalaa Midtown, oo ah aag woxoogaa woqooyi ka xiga magaalada Atlanta.
Kuleejka injineernimada Georgia waa mid ka mid ah kulleejooyinka injineernimada dhexdhexaadka ah ee adduunka ka jira waxay bixisaa saddex nooc oo ah Darajooyinka Injineeriyada;
Master's: MS oo leh qoraal, MS bilaa daraasad, laakiin leh mashruuc ama warbixin
Injineernimada Nidaamka Nidaamka
Kiimikada & Biomolecular Engineering
Injineerrada Rayidka & Deegaanka
Injineernimada Warshadaha & Nidaamka
Injineerinka isku dhafka ah
Qalabka Sayniska & Injineernimada Labadaba
Polymer, Dharka & Fibreerka Injineerinka
Kani waa mid ka mid ah kulleejooyinka heerka dhexe ee injineernimada si loogu qaado barnaamijyo mid kasta oo ka mid ah qaybaha injineernimada daraasadda. Jaamacadda Miami, waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn, oo la aasaasay 1809 waxayna ku taal Oxford, Ohio.
Sida laga soo xigtay US News & Warbixinta Dunida, Jaamacadda Miami waxay ka mid tahay 50-ka jaamacadood ee qaran. Waa mid ka mid ah hay'adaha tacliinta sare ee Mareykanka.
Miami College of Engineering and Computing waxay bixiyaan koorsooyin badan oo injineernimo ah sida
Kiimikada, Waraaqda, iyo Injineeriyada Biomedical
Sayniska kombiyuutarka iyo injineernimada softiweerka
Injineernimada makaanikada iyo wax soo saarka.
Wax ka baro mid ka mid ah jaamacadaha caanka ah ee adduunka oo aad ka hesho barnaamijka shahaadada injineernimada.
Duke waa jaamacad cilmi baaris gaar loo leeyahay oo ku taal Durham, North Carolina. Waxaa aasaasay 1838 Methodists iyo Quakers oo ku yaal magaalada maanta ee Trinity, waxaa markii dambe loo wareejiyay Durham 1892.
Duke Pratt School of Engineering waxaa la aasaasay 1939 wuxuuna bixiyaa shahaadada Bachelor of Science ee shan cilmiga injineernimada waaweyn:
Injineerinka korantada & kombuyuutarka.
Injineernimada deegaanka. Injineernimada farsamada.
Tani waa jaamacad kale oo cilmi baaris oo Mareykan ah oo ku taal soohdinta Medford iyo Somerville, Massachusetts. Tufts waa mid ka mid ah kulleejooyinka heerka dhexe ee injineernimada ee USA, oo lagu aasaasay 1852 oo loo yaqaan 'Tufts College' oo ay leeyihiin aqoonyahanno caalami ah oo Masiixiyiin ah. Jaamacadda Tufts waxay leedahay 5 xarumood;
Medford iyo Somerville
Hoolka Bariga iyo
Xarunta weyn ee Tufts waxay ku taalaa Walnut Hill oo ku taal Medford iyo Somerville. Xarunta Tufts School of Engineering waxay ku taalaa Xarunta Medford / Somerville. Jaamacadu waxay bixisaa barnaamijyo shahaadooyin xirfadeed ah oo loogu talagalay ardayda qalin jabisa, ardayda dhigata shahaadada koowaad iyo injineerada haweenka.
Barnaamijyada injineernimada ee laga bixiyo dugsiga Tufts ee injineernimada.
Kiimikada iyo injineernimada,
Jaamacadda Seattle waa jaamacad gaar loo leeyahay oo ku taal Seattle, Washington. Waa mid ka mid ah kulleejooyinka injineernimada dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah ee ugu waaweyn Waqooyi-bari Mareykanka. Waxa la aasaasay 1891.
Sida laga soo xigtay US News waxaa si isdaba joog ah loogu qiimeeyaa 10ka jaamacadood ee ugu sarreeya Galbeedka.
Jaamacadda Seattle waxay bixisaa barnaamijyo fara badan. Sideeda kuliyadood iyo iskuuladoodu waxay bixiyaan in kabadan 120 shahaadada hoose, qalinjabinta, iyo barnaamijyada shahaadada.
Kuliyada Injineeriyada ee Seattle
Seattle Collage of Engineering waxay bixisaa barnaamijyada injineernimada ee soo socda.
Injineerka madaniga ah iyo deegaanka (BS Injineerka madaniga ah, BS Injineerka madaniga ah ee leh takhasuska deegaanka, BS Injineeriyada Deegaanka Yar).
Injineerinka korantada & kombiyuutarka (BS Injineerinka korontada, BS Computer Engineering, Injineerinka korontada Yar, Injineeriyada Computer-ka Yar)
Injineeriyada Farsamada (BS Mechanical Engineering, Mechanical Engineering Minor).
Jaamacadda Binghamton oo ah mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada dhexdhexaadka ah waxay bixisaa barnaamij cilmi baaris firfircoon oo injineernimada iyo farsamooyin kale ah. Binghamton waxay ardayda siisaa jawi waxbarasho oo ammaan ah waxayna siisaa barnaamijka injineernimada soo socota;
Nidaamyada Isku-dhafan ee Sayniska iyo injineernimada
Injineerka Koronto iyo Kombiyuutarka,
Warshadaha iyo injineernimada,
Hadda oo aad ogtahay kulliyadaha injineernimada dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan ardayda, waxaad ka dooran kartaa edbinta injineernimada badan iyo anshax-hoosaadka si aad wax u barato. Haddii aad rabto inaad u aaddo injineernimada cilmi-baarista arday qalin-jabiya, Jaamacadda Texas ee Dallas waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan.
13 Dugsiyada Injineeriyada Kombiyuutarka ee ugu Fiican Caalamka.
injineernimada ugu fiicankulliyadaha farsamada ugu fiicankulliyadaha injineernimada ee waqooyi-barikuliyadaha injineernimada ee usakulliyadaha injineernimada qiimeynta 2019kulleejooyinka injineernimada wanaagsan ee si fudud loo geli karokulliyadaha injineernimada gaarka loo leeyahaykulliyadda injineernimada adduunka ugu sareysa
Previous Post:10 MBA-ga ugu Jaban ee Kanada
Post Next:15 Dugsiyada Farshaxanka Ugu Fiican Dunida